Ndị na-emepụta ihe nkiri Duxe ememme | Rayson
Ichụrụ ohiri isi mmiri dị elu nke mmiri na-acha odo odo na mmiri, e ji ohiri mpụta na-adọkpụ, plọ elu na-atọ ụtọ.
Na Rayson, technology mma na ọhụrụ na-anyị isi uru. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. spring bed Deluxe Taa, Rayson kwubara n'elu dị ka a ọkachamara na ahụmahụ soplaya na njem. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. Ị nwere ike na-achọpụta ihe banyere anyị ọhụrụ ngwaahịa spring bed Deluxe na anyị ụlọ ọrụ site na ịkpọtụrụ us.This ngwaahịa bụ nchebe ezuru. Ke nhazi, eri ji kee ákwà na-abụghị-emeso ya na ọ bụla chemical na e dere dịghị emerụ bekee.
Ahịa ndị chọrọ ịmatakwu banyere anyị ọhụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, dị nnọọ kpọtụrụ anyị.
Na zuru ezu mmepụta edoghi na ahụmahụ ọrụ, Rayson nwere onwe ha chepụta, ịzụlite, rụpụta, ma nwalee niile ngwaahịa ke oru oma n'ụzọ.
Nwere ike ị nyere m aka ka anyị onwe anyị imewe ma ọ bụ jiri m logo na ngwaahịa?
Anyị nwere ike ime matarasị dị ka gị imewe ma ọ bụ nye OEM ọrụ dị nnọọ mkpa ka ị na-enye anyị gị ngwaahịa sere ma ọ bụ logo photos.